Su’aalo fiqi ah oo ka dhalanaya xukunka ay dadka qaarkii ku deg degayaan ee ah ”nin xaaskiisa kufsanaya!” | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Su’aalo fiqi ah oo ka dhalanaya xukunka ay dadka qaarkii ku deg...
Su’aalo fiqi ah oo ka dhalanaya xukunka ay dadka qaarkii ku deg degayaan ee ah ”nin xaaskiisa kufsanaya!”
(Hadalsame) 17 Agoosto 2021 – Waxaan kamid ahay taageerayaasha Shaikh Abdulkadir Kishki. Laakiin maanta wuu ka dhacsan yahay. Sida ay ila tahayna, waxa uu isku dayay in uu ka jawaabo su’aal uusan isaguba fahmin. Faqiihuna kama jawaabo su’aal uusan fahansanayn.
Darsigaaga aad ayuu u qiimo badan yahay laakiin mowduuca ayuu ka baxsan yahay oo kama jawaabayo su’aalihii ay dooddu ka taagnayd.
Sheekhunaa, dooddu ma aha, ma u bannaan tahay ninka in uu xaaskiisa maquuniyo? Waxaan daawaday inta badan culimadii ka jawaabtay doodda la xiriirta “Maquuninta xaaska” intii aan daawaday kuma arag mid ka mid ah oo difaacaya. Mid midka sidaa sameeyana waa laga badan yahay oo hadalkiisu soo qaad ma laha.
Kishkoow qof kasta oo diinta saxda ah -haba yaraatee- wax ka yaqaanna wuu garan karaa in “Maquuninta xaaska” aanay Islaamka sal ku lahayn. Halka ay sartu ka quruntay ee buuqu uu ka taagan yahayna meeshaas ma aha.
Waxa la isku diiddan yahay waa erey-bixinta “KUFSI” Diinteennu kufsi micne ayuu u leeyahay, ciqaabna way dul-dhigtay. Waa in qof uu qof kale (Zina) galmo aan sharci ahayn ku san-dulleeyo.
Dunida aan muslimka ahaynna kufsi waxa ay u yaqaannaan in qof uu qof kale oo aan raalli ka ahayn u galmoodo (xataa haddii ay is-qabaan) Ciqaabta la marsiinayo qofka xaaskiisa sidaa yeela iyo midka qof aan xaaskiisa ahayn kufsadana waa isku mid oo iyaga uma kala soocna.
Aan ku weydiiyo’e ninka xaas kale leh ee mid kamid ah xaasaskiisa maquuniya, ma dhagax ayaa lagu dilayaa? Mise 100 karbaash ayaa lagu dhufanayaa?
Meesha ay doodda ugu weyni ka dhalaneyso waa halkaas. Dad badan oo aan anigu kamid ahayna waxa ay qabaan; maadaama -Islaam ahaan- aanay isku mid noqon karin ciqaabta qofka gabar islaameed kufsada iyo midka xaaskiisa maquuniya, dee isku macagna ma noqon karaan. Marka, innaga oo aan reer galbeedka iska daba galin uun, magac diinteenna iyo dhaqankeenna la jaanqaadi kara aan u day-dayno.
Waxaan qiyaasayaa in sheekha loo hoos-galiyay oo la yiri un “waxaa jira dad ku doodaya in xaaska la jujuubi karo”, ee maxaad ugu jawaabeysaa. Isaguna uu soo uruursaday axaadiistii iyo aayadihii la wada yaqiinnay ee timaamayay sida wanaagsan ee ay tahay in ninku uu naagtiisa ula dhaqmo.
Shaikh Abdulkadirow bal intaad mar kale kitaabbadaada la kala baxdo, noo soo diyaari cashar kale oo ka hadlaya in ereyga “Kufsi” aan sida gaalada u adeegsan karno iyo in ay haboon tahay in erey kale loo baadi-goobo.
Ugu dambeyn, hadalkaaga waxaa ka muuqatay caro aad u qabto qolyaha ay dadku “WAHAABIYADA” u yaqaannaan. Aniga oo aan raggaas difaacaynin waxaan kugula talinayaa in aadan dhex-dhexaadnimada ka bixin oo aadan adiguna xag-jir dhinaca kale ah noqonin, waxaanan ku xusuusinayaa aayaddii ahayd.
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ
Waxaa Qoray: Jacfar Kuukaay
Previous article”Waxaan qabannay shabakad dhan oo taabacsan TPLF!” – Booliiska Gobolka Soomaalida
Next article”Maxaa la idiinkaga cararayaa?!!” – Sawirkani waa farriin ay tahay inay wax badan ka fikiraan Daalibaan, Shabaab & koox kasta oo ku aragti ah